Maqaal- Natiijooyinka caafimaad ee laga dhaxlo guurka da’yarta | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / Maqaal- Natiijooyinka caafimaad ee laga dhaxlo guurka da’yarta
Maqaal- Natiijooyinka caafimaad ee laga dhaxlo guurka da’yarta
Posted by: Mahad Mohamed January 23, 2019
Taranka bini’aadamka iyo kobaciisa si uu u camiro dhulka uguna hirgaliyo akhlaaqda iyo dabeecadaha suuban ayaa ah udub dhexaadka ujeedooyinka uu bini’aadamka uu u joogo dhulka , si tarankaas uu uga hufnaado wax walbo oo dhaawacaya hadafka taranka iyo qaababkiisa.
Waxay diimuhu nidaamiyeen wado ixtiraameyso ibna’aadamka oo ku saleysan oggeysiin iyo sharfid labo jinsi oo kala duwan oo si sharfan u camira dhulka.
Wadadan oo lagu magacaabo guur ayaa ah heshiis sharci ah oo dhexmara labo qof oo kala jinsi ah oo dhaqanka iyo diintu isu oggolaatay si ay u gutaan waajibaadka guurka iyo waxyaabaha soo raaco.
Iyadow diimaha iyo shareecooyinka ay dajiyeen sharuudaha waaweyn ee guurka ayaa haddana dabeecada ibna’aadamka ee asalba ku saleysneyd qancinta nafta si walba oo ay ahaato, waxaa yimaada ama dhaca xad gudubyo lagu geesanaayo hal-ku-dhegyada guurka iyo ujeedooyinkiisa.
Xadgudubyadaas oo ay yartahay bulshada inay ka hadlaan ama ay istusaan iyagoo ku andacoonaya asalka guurka iyo aragtiyada qaar ee jira.
Xadgudubyada guurka dhexdiisa ka dhaco waxaa ka mid ah guurka da’yarta oo bulshada wadankeenna ku badan , sida aan la wadaagno wadamo dhowr ah, guurka da’yarta waxaa lo yaqaanaa guurka loo sameeyo gabdhaha ka yar 18 sanno , gabadhahaas oo badankood aan la weydiin aragtidooda ku aadan guurka ama si qasab ah loo aqal geeyo.
Gabdhaha ka yar 18 sanno waxay isugu jiraan kuwo qaangaar ah iyo kuwo aan qaangaarin in badan oo kamid ah waa kuwa aan u diyaarsaneyn aqbalida howlaha guurka iyo natiijooyinkiisa sida uurka, dhalidda iyo foosha, taas oo ka dhigeyso gabadha inay marto dhibaato xoog badan.
Waxaa kale oo u raacsan dhibaatooyinka caafimaad xalaadaha guurka da’yarta sida fool-raacida gabdhaha oo naftooda ay ku weyn karaan, dhiig baxa iyo nafaqadarida. Caabuqa xubnaha taranka iyo fistula iyo dhibaatooyin kale oo laga yaabo xitaa in cunuga uurka ku jiray ay u gudubto.
Waan qirsanahay aragtida xooga badan oo ay qabaan inta badan bulshada ee ku saleysan diinta, aragtidaas oo ah qaangaarnimada gabadha inay ku xalaaloobi karto oo aan qiimo laheyn ama xitaa aan muhiim aheyn in lagu xisaabtamo waxyaabaha kale ee saameyn karo jawiga guurka hase yeeshee u ololeeyaasha in gabadha guurkeeda lagu xero qaangaarnimadeeda oo keliya waxay ilowsan yihiin in qaangaarnimada tahay shardi guud laakiin ay qasab tahay in loo sii fiiriyo shuruudaha kale ee saameynayo ujeedada guurka iyo jawigiisa.
Waxaan ka mid ah waxyaabaha dhibaateyn karo jawiga guurka jirrooyinka iyo dhibaatooyinka soo wajahi karo gabadhii da’da yareyd ee la guursaday sida minka oo ka qarxo , Infaction-ka soo noqnoqda , umul raacista iyo wixii lamidka ah.
Su’aasha la isweydiin karo waxay tahay ujeedada suurta geli karta jawi guur oo sidan ah, dhacdooyinkan waxay naga dhigayaan in aan ku xisaabtano shuruudaha kale ee guurka waa haddii aan rabno guur waafaqsan caqliga iyo diinta , xaqiijinayana ujeedooyinka guurka .
W/Q: Abdinasir Shide
Previous: Ruushka oo dadkiisa da’da ah baraya sida loo isticmaalo internet-ka
Next: Man Utd oo dib ugu soo laabatay xiisaha Perisic
32-jirka gacmaha la’ ee ciyaara kubadda Miiska
La kulan: Gabadha kaliya ee Taksiga ku dhex wadata Qaza
Denmark oo gawraceysa Digaagga si ay u xakameyso herkabka Shimbiraha